Ingabe izinhlelo ezilwa nesichotho zingathinta isomiso emaxhaphozini? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ingabe izinhlelo ezilwa nesichotho zingathinta isomiso emaxhaphozini?
Izinhlelo zokulwa nesichotho kanye nemiphumela yazo engaba khona kusomiso zixoxwa kaningi. Kunohlelo olusetshenziswayo lapho kulindeleke ukuthi kube nemvula yesichotho kanti ezinye izindiza ezethulwe nguMbuso zifutha i-iodide yesiliva ukuqeda amafu, ukugwema isichotho nokulimala kwezitshalo. Lokhu sekuvele kubikwe kaningi njengokuthile okulimaza ngempela.
Ngabe uhlelo lokulwa nesichotho luyasithinta isomiso emaxhaphozini?
1 Uhlelo lwesomiso nesichotho sexhaphozi
2 Gwema isichotho nge-iodide yesiliva
Uhlelo lwesomiso nesichotho sexhaphozi
ILaguna de Gallocanta, indawo eyixhaphozi eSpain, ibhekene nesomiso esibi ngemuva kweminyaka emihlanu ilandelana. Cishe abalimi abangama-300 abavela eGuadalajara, eSoria, eZaragoza naseTeruel Bahlangane badingida ukuthi ngubani obhekene neqiniso lokuthi amasimu ayoma ngenxa yokuntuleka kwemvula.
Abalimi babike "izindiza ezisolisayo" ezivela lapho amafu emvula esezokwakhiwa bese enyamalala ngaphandle kwethonsi. ISilver iodide iyinhlanganisela yamakhemikhali esiza ukuncibilikisa ukwakheka kwamafu futhi ichithe amafu esiphepho.
Yize abalimi bengezona izazi zefiziksi noma izazi zezulu, bathi bayalazi izulu nomhlaba, basebenze impilo yabo yonke kuncike kubo. Kodwa-ke, abavela eGeological and Mining Institute of Spain (Igme) bayamemezela ukuthi, maphakathi nophenyo, "Akukabi bikho idatha eqinisekile" ukusungula ubudlelwano phakathi kwabaphehli besichotho nemvula yaseGallocanta, kuchaza umuntu ophethe ucwaningo.
Okuqinisekisiwe ukuthi imvula yehle kakhulu ezingeni lamanzi eGallocanta uma kuqhathaniswa nenye yonke inhlonhlo kusukela lapho le nhlanganisela isetshenziselwa ukuvimbela isichotho.
Ucwaningo luthole imininingwane ngokuhlungwa kwe-iodide yesiliva emhlabathini okuthi noma ingekho phezulu kakhulu, yeqe imikhawulo evunyelwe umthetho osetshenziswayo womhlaba.
Okwesazi sezulu nomethuli ngezimpelasonto zika-El Tiempo eCastilla-La Mancha Media, uJonathan Gómez Cantero, "Akunakwenzeka nakancane" ukudala isomiso, futhi icacisa ukuthi inqubo ye-iodide yesiliva isetshenziselwa "ukuphatha izimo zezulu, hhayi ezesimo sezulu."
Gwema isichotho nge-iodide yesiliva
I-iodide yesiliva iyinhlanganisela yamakhemikhali esebenza njenge into eheha umswakama, okungukuthi, i-hygroscopic. Lapho i-iodide yesiliva ihlangana namafu futhi ikwazi ukusebenza (ngoba ezimweni eziningi ayilusizo ekuhambeni) ibangela ukuthi iconsi liwe ngaphambi kokuba liqine. Lokhu kwenzelwa ukuvikela isichotho nomonakalo ongawudala.
Kodwa-ke, uchwepheshe uqinisekisa ukuthi i-iodide yesiliva inobungozi obungcolisayo benhlabathi namaxhaphozi, ngoba kuyinsimbi okuthi, uma igcwele izicubu zezilwane, ibe yinkinga yangempela kulo lonke uchungechunge lokudla futhi size sifinyelele nasemizimbeni yethu, njengasendabeni ye-mercury.
Noma kunjalo, kuyaphinda lokho "Akukho ukukhwabanisa kwesimo sezulu", kanye nokuthi "awekho ama-trajectories amakhemikhali noma imizila yamakhemikhali", njengoba kusikiselwe "izinganekwane zasemadolobheni". Babona kunesidingo sokuthi banikeze inkulumo kubalimi ukuze bayeke ukucabanga ukuthi bafuna ukweba imvula.
Okhulumela ipulatifomu yabalimi uqinisekisa ukuthi le mpi izalwa ngenxa yokushoda komthetho kulokhu. Kunemibono eminingi yezobuchwepheshe ngale ndaba. Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi iodide ayinamphumela; abanye bathi imvula iyahwamuka; abanye, ukuthi bayiphambukisela ezindaweni ezingomakhelwane; abanye, ukuthi okutholakalayo ukuthi lina kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, umkhulumeli ubuza ukuthi kungani yena, lapho ethenga i-herbicide, kufanele akhombise ikhadi lobuchwepheshe, futhi asho ukuthi uzolilahla nini futhi kuphi. Kodwa-ke, uhulumeni unikeza izimvume zokungcolisa umhlabathi abawulimayo.
Endabeni yemizila yamakhemikhali, kuningi okubhaliwe futhi iqiniso ukuthi kunzima ukwazi ukuthi kuliqiniso noma cha, uma unikezwa imibono ehlukahlukene kanye nezintshisekelo ezifihliwe. Futhi wena, ucabangani ngakho konke lokhu?
Umthombo: Manta Montojo (http://www.efeverde.com/noticias/sistemas-antigranizo-gallocanta/)
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ingabe izinhlelo ezilwa nesichotho zingathinta isomiso emaxhaphozini?
Ukushintsha kwesimo sezulu nakho kungashintsha umbani
Amachibi okufakelwa wokulingisa imithelela yokuguquka kwesimo sezulu